Farmaajo oo jebiyay Dastuur soo jireen ah | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo jebiyay Dastuur soo jireen ah
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jebiyay dastuur soo jireen ah oo ay ku dhaqmi jireen madaxdii isaga ka horeysay ee iskaga daba maray xilka Madaxweynaha tan iyo sanadkii 1960-kii.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jebiyay dastuur soo jireen ah oo ay ku dhaqmi jireen madaxdii isaga ka horeysay ee iskaga daba maray xilka madaxweynaha tan iyo sanadkii 1960-kii.
Madaxweynaha waxaa u buuxsantay muddo 30 cisho ah oo aanu soo magacaabin Ra'iisul Wasaarihii bedeli lahaa Xasan Cali Kheyre oo sifo sharci darro ah lagu riday 25 bishii la soo dhaafay, kadib markii uu ka biyo diiday go'aanka muddo kororsiga uu Madaxweynaha watay, baarlamaankana kaashanayay.
Axadi Qarameedkii Dowladdii KMG lagu soo dhisay dalka Kenya sanadkii 2004 ayaa dhigayay in Madaxweynaha uu ku soo magacaabo Ra'iisul Wasaaraha muddo 30 cisho gudahood, haseyeeshee Dastuurka KMG ee sanadkii 2012 la diyaariyay ayaa wax muddo ah ku qorneyn magacaabidda Ra'iisul Wasaare.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxweynaha ugu baaqay in uu ixtiraamo dastuurka dalka, islamarkaana uu soo magacaabo Ra'iisul Wasaaraha, maadaama 30-kii cesho ee laga sugayay aano soo magacaabin.
”Madaxweyne Farmaajo in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee jebiya soo jireenkii dastuuriga ahaa, waxey xoojineysaa dhaqankiisii dastuur ku tumashada ahaa. Waxey kaloo tilmaam ka bixineysaa ninkii 30 beri ixtiraami waayey, in aan laga sugaynin in uu aqbalo in 4-tii sano ka dhammaatay. Ninka aan dastuur ixtiraamaynin maxaa lagu aaminayaa in uu dhowro?” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Farmaajo ayaa noqday Madaxweynihii u horreeyay taariikhda oo aan muddo 30 cisho Ra'iisul Wasaare ku soo magacaabin, illaa iyo 1960 iyo dowladihii isaga kala dambeeyay burburkii kaddib waxaa dhaqan siyaasadeed u aheyd in Ra'iisul Wasaaraha lagu soo magacaabo muddo 30 cisho gudahood.